‘Okokuqala ngqa ebomini bam, ndafumana ulonwabo.’
UHILTON wayewuthanda umdlalo wamanqindi. Xa wayeneminyaka esixhenxe, wayesoloko esilwa! Xa wayekwisikolo samabanga aphakamileyo, yena nabahlobo bakhe babehlala bekhangela umntu abanokumbetha. Uthi: “Ndandilisela, ndingcakaza, ndibukela iphonografi, ndingawaphathi kakuhle amabhinqa, ndithuka nabazali bam. Abazali bam babecinga ukuba andinakuze nditshintshe. Emva kokuba ndigqibe isikolo, ndemka ekhaya.”
Xa uHilton wabuyela kowabo emva kweminyaka eyi-12, abazali babengakholelwa ukuba lo yayingunyana wabo! Wayezolile, enesidima futhi enentlonipho. Yintoni le yamnceda watshintsha kangaka? Ukumka kwakhe ekhaya, waye wacingisisa ngekamva lakhe. Wafundisisa iBhayibhile efuna ukubona ukuba ingabutshintsha na ubomi bakhe. UHilton uthi: “Ndandiye ndizenze izinto endizifunde eBhayibhileni, loo nto ke yayitheth’ ukuba nditshintshe ubuntu bam ndize ndenze umyalelo okumaEfese 6:2, 3 wokuthobela abazali bam. Okokuqala ngqa ebomini bam, ndafumana ulonwabo lokwenene ndaza ndavuyisa umama notata, ndayeka ukubakhathaza!”
Ibali likaHilton libonisa indlela eluncedo ngayo iBhayibhile, nendlela enamandla ngayo imilinganiselo yayo. (Hebhere 4:12) Makhe sithethe ngeminye yale milinganiselo—ukunyaniseka, ukuzeyisa, ukuthembeka emtshatweni kunye nothando—nendlela ezi zinto ezinokusinceda ngayo ebomini.
Yincwadi ephelelwe Lixesha?
Abanye bathi iBhayibhile iphelelwe lixesha, ifana nencwadi ephuma nekhompyutha esele indala. Kodwa loo mzekelo awuchananga. Iikhompyutha ziyatshintsha zize ezo ncwadi ziphelelwe lixesha. Zona zinto ezibalulekileyo ebantwini azitshintshi. Ngokomzekelo, njengookhokho bethu, abantu namhlanje bayazithanda iimpawu ezifana nothando, ukunyaniseka emtshatweni, impatho entle, baze bakhathazwe zezifana nokucatshukelwa, ukunganyaniseki emtshatweni okanye inkohlakalo. Ngoko ke xa kuthethwa ngezona zinto zibalulekileyo, “akukho nto intsha phantsi kwelanga.”—INtshumayeli 1:9.